ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ ပုံတင် ကောင်း တဲ့ “မမ,ညီ မ” များ အ တွက် ပေးစာ – Zartiman
မမ ညီမလေးများ အန်တီများ ပုံတင်တော့ တင်ပါ။အတင် ကောင်းတာနဲ့ အတင်မကောင်းတာ ခွဲခြား သိမြင် ဖို့ လိုမယ် တွေ့တိုင်း မြင်တိုင်း သာ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဆုံးကို ရှာတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်နော်က မြင်ရင် ပြောရမှ ကျေနပ်တဲ့ သူဆိုတော့ ကွယ်ရာမှာ မနေတတ်တာ အ ကျင့်လေရှေ့ထွက် ပြောရမှ ကျေနပ်တာ ခုလိုပြောမိလို့ မုန်းချင် မုန်းကြပါစေ။အခါတစ်ရာ အမုန်းခံ လိုက်မယ်ပြောသင့်လို့ ပြောပါရစေ။မ မ နဲ့ ညီမလေးများ Fb ဆိုတာ သုံးတတ်ရင် အကျိုး ဖြစ်မယ် မသုံးတတ်ရင် အကျိုး နဲ့ မယ်အဆုံးမှာတော့ မမတို့ ညီမ တို့ အတွက် အန္တရယ် စက်ကွင်းကြီး ဖြစ်လာမယ် တချို့သော မိန်းကလေး တွေက သုံးတော့ သုံးကြတာပဲ ဘာအကျိုးမှ မရှိ မေးစရာပေါ့လေ….
သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဘာကြောင့် fb ဆိုတာ ပေါ်လာ တာလဲ မသိတော့ခေတ်လိုက်လို့ ဆိုရမလား ခေတ်ပျက်လို့ ဆိုရမလားတင်လိုက်တဲ့ ပုံအလန်းဇယားတွေ ဘာအကျိုး မှ မရှိလိုင်းပေါ် ပုံရိုက်တင်လို့ရော နိုင်ငံကျော် သွားမှာတဲ့လား မဟုတ်မမှန်တဲ့ စိတ်ကူးတွေကို မသယ် ဆောင်လာပါနဲ့လား မမတို့ ညီမတို့ရယ်Like in comment တစ်ထောင် ပြည့်အောင် ပုံလှတွေ တင်တာလားလိုင်းပေါ်မှာ လူကောင်းတွေ က ခပ်နည်းနည်းရယ် သတိရှိမှပေါ့ မမတို့ ညီမတို့ ပုံတင်မှတော့မောင်မောင်တို့လို့ ယောကျာ်းတွေက ချစ်တယ်ပြောမယ် လှတယ်ပြောမယ် သားပြော မယားပြော ပြောလာကြမယ် ဒါကမဆန်းပါဘူး တင်သူရှိလို့ ပြောသူရှိတာပေါ့။
တင်ပါ မတင်နဲ့လို့ မဆိုလိုပါဘူး တစ်ခါတလေ ခရီးသွားခိုက် အမှတ်တရလေးတွေ အဖြစ် တစ်ခါတလေ မိသားစု ဆုံတုန်းလေး အမှတ်တ ရအဖြစ်ဒါတွေက မည်သူမဆို လက်ခံလို ရပါတယ်။မိန်းကလေး မှန်ရင် ကိုယ်အလှကို ကိုယ် ရုပ်လုံး ပေါ်အောင် ထုပ်ပြနေစရာ မလိုပါဘူး မိန်းကလေးမှန်ရင် တူတူပဲ ဘယ်မိန်းကလေးမှာမှ အပိုမပါလာဘူး။သိထားရမှာက ကိုယ့်ပုံကို တင်ပြီးကြွာရလောက်အောင် မင်းသမီး လည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရင်လေးတာတော့အမှန်ပဲ ခေတ်ပျက်လာတော့ မမတို့ ညီမတို့ အတွေးလေးတွေ ပျက်စီးသွားမှာကို မမ တို့ ညီမလေး တို့ရယ်။Fb ကို အပျော်သုံးရင် အလိမ်ညာတွေ ရောက်လာမယ် Fbကို အတည်သုံးရင် ဗဟုသုတ တွေ ရသွားမယ်။
Fbကို ပေါ့ပျက်ပျက် သုံးရင် ဘဝပါ ပျက်သွားလိမ့်မယ်။ထမက်းစာလဲ ပုံတင် မုန့်စားလည်းပုံတင် သွားလည်းတင် ထိုင်လည်းတင် အိပ် လည်းတင် အတင်းအမျိုးပေါင်းစုံတော့ မဖြစ်စေချင် ပုံတင်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို လာခင်သူကလည်း ရိုးသားသူ မရှိ သလောက် ရှားနေလိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ။
မေတ္တာ စေတနာ များစွာဖြင့်
ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျကွညျ့ပါ ပုံတငျ ကောငျး တဲ့ “မမ,ညီ မ” မြား အ တှကျ ပေးစာ
မမ ညီမလေးမြား အနျတီမြား ပုံတငျတော့ တငျပါ။အတငျ ကောငျးတာနဲ့ အတငျမကောငျးတာ ခှဲခွား သိမွငျ ဖို့ လိုမယျ တှတေို့ငျး မွငျတိုငျး သာ ပွောရမယျဆိုရငျ အဆုံးကို ရှာတှမှောမဟုတျပါဘူးကြှနျနျောက မွငျရငျ ပွောရမှ ကနြေပျတဲ့ သူဆိုတော့ ကှယျရာမှာ မနတေတျတာ အ ကငျြ့လရှေထှေ့ကျ ပွောရမှ ကနြေပျတာ ခုလိုပွောမိလို့ မုနျးခငျြ မုနျးကွပါစေ။အခါတဈရာ အမုနျးခံ လိုကျမယျပွောသငျ့လို့ ပွောပါရစေ။မ မ နဲ့ ညီမလေးမြား Fb ဆိုတာ သုံးတတျရငျ အကြိုး ဖွဈမယျ မသုံးတတျရငျ အကြိုး နဲ့ မယျအဆုံးမှာတော့ မမတို့ ညီမ တို့ အတှကျ အန်တရယျ စကျကှငျးကွီး ဖွဈလာမယျ တခြို့သော မိနျးကလေး တှကေ သုံးတော့ သုံးကွတာပဲ ဘာအကြိုးမှ မရှိ မေးစရာပေါ့လေ….
သူတို့ကိုယျတိုငျက ဘာကွောငျ့ fb ဆိုတာ ပျေါလာ တာလဲ မသိတော့ခတျေလိုကျလို့ ဆိုရမလား ခတျေပကျြလို့ ဆိုရမလားတငျလိုကျတဲ့ ပုံအလနျးဇယားတှေ ဘာအကြိုး မှ မရှိလိုငျးပျေါ ပုံရိုကျတငျလို့ရော နိုငျငံကြျော သှားမှာတဲ့လား မဟုတျမမှနျတဲ့ စိတျကူးတှကေို မသယျ ဆောငျလာပါနဲ့လား မမတို့ ညီမတို့ရယျLike in comment တဈထောငျ ပွညျ့အောငျ ပုံလှတှေ တငျတာလားလိုငျးပျေါမှာ လူကောငျးတှေ က ခပျနညျးနညျးရယျ သတိရှိမှပေါ့ မမတို့ ညီမတို့ ပုံတငျမှတော့မောငျမောငျတို့လို့ ယောကျြားတှကေ ခဈြတယျပွောမယျ လှတယျပွောမယျ သားပွော မယားပွော ပွောလာကွမယျ ဒါကမဆနျးပါဘူး တငျသူရှိလို့ ပွောသူရှိတာပေါ့။
တငျပါ မတငျနဲ့လို့ မဆိုလိုပါဘူး တဈခါတလေ ခရီးသှားခိုကျ အမှတျတရလေးတှေ အဖွဈ တဈခါတလေ မိသားစု ဆုံတုနျးလေး အမှတျတ ရအဖွဈဒါတှကေ မညျသူမဆို လကျခံလို ရပါတယျ။မိနျးကလေး မှနျရငျ ကိုယျအလှကို ကိုယျ ရုပျလုံး ပျေါအောငျ ထုပျပွနစေရာ မလိုပါဘူး မိနျးကလေးမှနျရငျ တူတူပဲ ဘယျမိနျးကလေးမှာမှ အပိုမပါလာဘူး။သိထားရမှာက ကိုယျ့ပုံကို တငျပွီးကွှာရလောကျအောငျ မငျးသမီး လညျး မဟုတျဘူးဆိုတာ ရငျလေးတာတော့အမှနျပဲ ခတျေပကျြလာတော့ မမတို့ ညီမတို့ အတှေးလေးတှေ ပကျြစီးသှားမှာကို မမ တို့ ညီမလေး တို့ရယျ။Fb ကို အပြျောသုံးရငျ အလိမျညာတှေ ရောကျလာမယျ Fbကို အတညျသုံးရငျ ဗဟုသုတ တှေ ရသှားမယျ။
Fbကို ပေါ့ပကျြပကျြ သုံးရငျ ဘဝပါ ပကျြသှားလိမျ့မယျ။ထမကျးစာလဲ ပုံတငျ မုနျ့စားလညျးပုံတငျ သှားလညျးတငျ ထိုငျလညျးတငျ အိပျ လညျးတငျ အတငျးအမြိုးပေါငျးစုံတော့ မဖွဈစခေငျြ ပုံတငျကောငျးတဲ့ မိနျးကလေး တဈယောကျကို လာခငျသူကလညျး ရိုးသားသူ မရှိ သလောကျ ရှားနလေိမျ့မယျလို့ ပွောလိုကျပါရစေ။
မတ်ေတာ စတေနာ မြားစှာဖွငျ့